प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ? – Health Post Nepal
२०७५ माघ २० गते १९:०२
नेपाल सरकारलाई बधाई छ । एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग निहुँ खोज्यो, त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारसँग । यस्तो बलियो सरकार छ, सरकारले देखाइदियो । सरकारलाई बधाई छ । सरकारको अपार सफलतामा, सरकार बनाउने माननीय सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन । तर, खुसी हुने लाममा थुप्रै उभिएका रहेछन् । प्रत्येक वर्ष करिब १५ सयजति नेपाली विद्यार्थी नेपालबाहिर डाक्टरी पढ्न बाहिरिए । डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने– नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरीकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्र कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैन ।
१५ सय विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको, करिब–करिब १२/१३ सयले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन् । वर्षको १२/१३ सय नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए । यिनलाई बाहिर पढाएर यी सर्वाहाराहरूले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, स्वरोजगार भइरहेका थिए । डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसकेपछाडि बाहिर पढाउने काम गर्नेको काम चौपट भएपछि, उनीहरू बडा खुसी भएका थिए । सरकारलाई बधाई छ ।
केही मेडिकल कलेजबाहेकका मेडिकल कलेजले राम्रो गरिरहेका थिए । यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै कुरा मिलाउँथे । बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे । डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे । सयजना पठाउन पाउने अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीका आधारमा करिब–करिब दुई सय सिट पाइरहेका थिए ।
डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे । सिटसंख्या घटेर सयमा पुर्याइदिए । यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए । र, सय सिटसंख्यामा घटाइसकेपछाडि करिब–करिब १ करोडहाराहारीमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फी ५० प्रतिशतमा ल्याइदिए ।
यी मेडिकल कलेज सञ्चालक विचराहरू डाक्टरहरूसँग औधी रिसाएका थिए । यी आज बडो खुसी भएका छन् । सरकारलाई बधाई छ ।
मेडिकल कलेजको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भए भनेर डाक्टर केसीले आन्दोलनमार्फतसरकारसँग एउटा माग राखे । त्यो मागअनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो । डाक्टर केसीले भने– समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ । यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरूलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूबारे लेखेको छ, बोलेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।
सरकारले उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । तर, ती सबै रिसाएका थिए । डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन् । को खुसी भएका छैनन् ? सम्मानीय सभामुख महोदय ! लोकमानसिंह कार्कीदेखि लिएर कालिकास्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन् । फेरि पनि यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ ।
बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ । हामीले दुईतिहाइको दम्भ भनेर भन्यौँ । तर, यो दुईतिहाइको दम्भ कहिले पनि देख्न पाएका थिएनौँ । यो संसद्मा सम्मानित कुनै वेला अनाथ, अपांग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाका निम्ति कानुन बनाउने अवसर प्राप्त भयो । त्यसमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका लागि जमिन दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ र १० वर्षमा उसले त्यो आफैँ बेचबिखनसम्म गर्न पाउने गरीकन हकहस्तातरण गरी संशोधन दर्ता भयो । त्यसमा पनि दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।
शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाई देख्न पाइएन । यस्ता अनेक ठाउँमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।
दुईतिहाइले सुतेको डाक्टरलाई त उठाइदियो । सुतेका डाक्टर उठे । प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्रै होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास सुत्यो । त्यो विश्वास कसले उठाइदिने ? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ? हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ । नेपालीले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको हाला । देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्य होइन, यस्तो वितण्डाबाजी तर्क र बागचालवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।
चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएको छ । पारित भएको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा जुन प्वाल राखिएको छ, त्यो प्वालबाट छिरेर बदनियतका साथ जे गर्छु भनेर सोचिएको छ, त्यो गर्न दिइन्न । नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र चिकित्साशिक्षामा भएका सुधारमाथिको अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ । त्यो हिम्मत पनि छ, त्यो नैतिक तागत पनि छ ।
(थापाले आइतबारको संसद्मा व्यक्त गरेको विचारको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी संक्षिप्त अंश)
धामी, बालक र अस्पताल